6 Hogaamiye Oo Ku Nool Hodantinimo Qaali Ah Iyo Nolol Tii Sarraysay Shacabkooduna Gaajo U Dhimanayaan Daqiiqad Kasta | FooreNews
Home Barnaamijo 6 Hogaamiye Oo Ku Nool Hodantinimo Qaali Ah Iyo Nolol Tii Sarraysay Shacabkooduna Gaajo U Dhimanayaan Daqiiqad Kasta
6 Hogaamiye Oo Ku Nool Hodantinimo Qaali Ah Iyo Nolol Tii Sarraysay Shacabkooduna Gaajo U Dhimanayaan Daqiiqad Kasta
FoorenewsNov 06, 2017Barnaamijo, Sheekooyin0
Dunidan guudkeeda waxa ka taliya oo jira hogaamiyayaal shacabkooda la dareen ah oo u shaqeeya wax badana u qabta halka kuwo kale oo badani ay iyana ka hodmaan oo kali ah iyaga iyo qoysaskooduna aad ugu tagri faraan hantida umaddooda saboolnimadu dishootay. Qormadan waxa aan ku eegi doonaa Lix hogaamiye oo isugu jira madaxweynayaal iyo boqoro kuwaasi oo noqday lixda hogaamiye ee iyagu haysta nolol qaalli ah iyo hanti aan la qiyaasi Karin shacabkooduna daqiiqad walba Gaajo iyo dagaalo ugu dhimanayaan dalalkooda.
Hogaamiyaha waddanka Woqooyiga Kuuriya ee kali-taliyaha ahi waxa uu ka mid yahay hogaamiyayaasha adduunka ugu hantida badan. Waxa uu ku nool yahay nolol aad u sarraysa oo qaalli ah halka shacabkiisa in badan oo ka mid ahi gaajo ugu dhimanayaan. Warbixintii ugu dambaysay ee qaramada Midoobay ka soo saartay gaajada iyo saboolnimada adduunka waxa meel sare kaga jira dalka Kuuriyada Woqooyi oo dadku gaajo ugu dhimanayo.
Ku dhawaad kala badh shacabka waddankaasi ma haystaan luqmad ay afka galiyaan saddexda wakhti waxaanay ubadku u dhimanayaan nafaqo darro, haweenka iyo dadka jilicsana hadalkooda daa. Iyada oo ay sidaa tahay haddana warbixin uu sannadkii 2015 daabacay wargeyska Telegraph waxa uu ku shaaciyey sawiro dayaxgacmeed oo laga soo qaaday madaar dhan oo gaar u ah diyaaradaha uu leeyahay Hogaamiyaha da’da yar ee Kim Jung Un. Hadda waa madaar dhan oo ay kaliya fadhiistaan diyaaradaha uu iskii gaar ahaaneed u leeyahay hogaamiyahan yari. Waxa uu leeyahay qasriyo waaweyn, beero loo dalxiis tago, xaflado gaar u ah habeenkii oo laga ciyaaro iyo barkado lagu dabbaasho oo nooca raaxada ah. Sannadkii 2016 dadka gaajada ugu dhintay waddankaasi waxa lagu qiyaasay 8,000 oo qof.
2. Boqor Muswaatiga Dalka Swaziland
Sannadkii 2014 waddankaasi yar ee Swaziland ee ku yaalla Koonfur Afrika waxa uu miisaaniyad gaar ah u qoondeeyey Boqorka dalkaasi iyo xaasaskiisa isaga oo markii hore aanay jirin cid xisaabisaaba waxa uu qaato iyo hantida uu bil walba leeyahay. Sannadkaasi 2014 waxa masruufka boqorka iyo xaasaskiisa laga dhigay 61-Malyuun oo dollar sannadkii, halka dakhliga qofka waddankan yar u dhashay lagu qiyaaso maalintii wax ka yar 1-dollar, lagana warramo gaajada iyo faqriga dadka dalkaasi haysta oo keentay in ay ka mid noqdaan dalalka ugu geerida badan dhinaca gaajada. Wargeyska Forbes waxa uu dhawaan hantida boqorkan ku sheegay in ay ka badan tahay 200 oo Malyuun oo dollar.
Isaga oo leh guryo qasriyo ah oo waaweyn, gawaadhida qaalliga ah ee lagu raaxaysto, diyaarado lagu raaxaysto oo gaar ah iyo hanti badan oo dahab iyo macdano kale ugu jirta. Gaadhi ka mid ah kuwa raaxada ee uu boqorkani leeyahay waxa ka mid ah gaadhi noociisu yahay BTY oo qiimihiisu joogo in ka badan 500 oo kun oo dollar. Sannadkii 2004 wargeyska The Sun waxa uu baahiyey warbixin uu kaga hadlayo dalab boqorka dalkaasi xukuumadda kaga dalbaday in ka badan 15 Malyuun oo dollar oo la sheegay in lagu qurxinayo waxna lagaga badalayo quruxda guryaha ay degan yihiin xaasaska boqorku, gaar ahaan saddex qasri oo ka mid ah kuwa ay daggan yihiin xaasaskiisu isaga oo la sheego in uu qabo in ka badan 14 xaas. Taasi oo xukuumaddu baas garaysay sidaana lacagta xaddigaa le’eg lagu sheegay in lagu qurxinayo (House Decoration) qusuurta boqorka.
Previous PostXisbiga KULMIYE oo Wacdaro aan hore loo Arag ku soo Bandhigay Magaalada Ceerigaabo Maalinta Lixaad ee Ololihiisa Next PostWasiirkii Shaqada Iyo Arrimaha Bulshada Oo Xukuumadda Iyo Xisbiga KULMIYE-Ba Iska Casilay Kuna Dhawaaqay In KULMIYE Dartii Uu Xilka Uga Tagay Ee Aanu Dhib Ka Tirsanayn M/Siilaanyo